DAAWO VIDEO:kenya oo Ku Dhawaaqday Tageerada Sheekh Shariif 2020 Una Balan Qaaday Tageero Xoogan. | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
DAAWO VIDEO:kenya oo Ku Dhawaaqday Tageerada Sheekh Shariif 2020 Una Balan Qaaday Tageero Xoogan.
Kenya Ayaa U muuqanaysa Inay Mar kale Tageeradeeda U Muujinayso Madaxweynahii Hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed,Waxaana Dhowr Wargeys Ugu Waweyn lagu daabacay Maal Mahani Warbixino Ka Hadlaya Eedayntiisa Dowlada.
Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo Heshiis Muran badan Dhaliyey Kenya La Saxeexday Ayaa Kenya Soo Xigatey hadaladiisa Ugu Danbeeyey Iyo Inay Ka waramaan Taarikhdiisa Siyaasada.
Halkani Riix Video Warbixin Sh. Shariif
Tani Waa Warbixinta Stander Wuxuuna Ku bilaabay,dadka Soomaaliyeed Inbadan waxay u arkaa inuu yahay aabaha taariikhda casriga ah ee Soomaaliya ka dib doorkiisii ku aaddan u wareejinta gobolka ku-meel-gaarka ah illaa dowlad federaal ah.
Hadana wuxuu dhaleeceynayaa dowlada hada jirta.
“Mas’uuliyiinta ayaa ku guuldareystay inay dejiyaan qorshe amni oo lagula tacaalo weerarada dilalka ah ee ka dhaca Muqdisho,” ayuu u sheegay Sheekh Shariif Daly Nation .
“Dowladdu waa inay aqbashaa guul darrooyinka ay ka qabto inay muwaadiniinta ka ilaaliso Al-Shabaab,” ayuu raaciyay, isagoo tixraacaya qaraxyadii gaariga ee bishii hore, kaasoo mid ka mid ah lagu dilay 85 qof.
Weerarada ayaa u muuqda kuwo sii xoojinaya rabitaankiisa ku aadan inuu dib ugu soo laabto kursigii uu ka tagay 2012, ka dib markii uu hogaaminayay dowladii ku meel gaarka aheyd 2009.
Sannadkii 2019, wuxuu abaabulay lix wax-qabad oo siyaasadeed “Ayuu Sheegay Stander.
Sheekh Shariif Waxaa uu Aas Aasay hada Xisbiyo Qaran , waxaa ka mid ah xisbigiisa Himilo Qaran, Ilays iyo Midowga Nabadda iyo Horumarka oo uu hoggaaminayo madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud.
“In la helo xisbiyo siyaasadeed oo adag waa habka ugu wanaagsan ee hore loo maro,” ayuu yidhi.
“Dadka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin in la siiyo awood ay ku xukumaan oo ay iskaga difaacaan Cadowga Argagixisada,Kuna Tageeraan Shaqsiga Ka Helin kara Ayuu Shariif Yiri.
Haddii isbahaysi ku khafiifin karo Soomaaliya oo 15-kii sano ee ugu dambeysay lagu maamulayay siyaasada qabiilka waxay noqon doontaa tijaabo. Laakiin su’aasha ugu weyni waxay tahay bal in doorasho la qabanayo iyo haddii ay noqon lahayd hal nin, hal cod.
Waxaana jira caqabado. Soomaaliya waxay u baahneyd inay meel mariso dastuur cusub, diiwaan galiso cod bixiyayaasha isla markaana u qorsheyso doorashada guud ahaan dalka marka dowladaha federaalku ay jiidayaan jihooyinka ka soo horjeeda.
Laakiin tan ugu weyni waa tan Shabaab. Sannadkii la soo dhaafay, kooxdu waxay qarxisay bambaanooyin baabuur ku dhawaad ​​toddobaad kasta, halkaas oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen kumanaan.
Axmed wuxuu moodayaa inuu adeegsan karo qalab gaboobay si uu ula dagaallamo. Markii la sameeyay FNP, isbahaysigu wuxuu sheegay inay dalbanayaan in codbixinta aan dib loo dhigin oo ay abuuri karto siyaasad nabadgelyo oo ka wanaagsan.
Wargeysyada Kenya ee Daly Nation Iyo Stander Ayaa Go’aminaya Wanaaga Ay Iyagu U Cumaamadeen Madaxweyne Soomaaliya Soo maray Hadana Musharax Ah,Xili Soomaaliya Iyo Kenya Khilaaf Bada Dhex yaalo,taasi oo lagu Tilmaamayo Inay Tahay Hordhac Shacabka Lagu baraarujinayo In la Doorto.
Waa shaqsiga saxda ah ee hogaamin kara Soomaaliya. Hogaankiisa, Shabaab waxaa laga saaray Magaalada Muqdisho, ”ayuu yiri Wergayska oo Soo Xiganaya Masuulin Xisbigiisa Ka Tirsan,
“Haddii dowladda ay dhab ahaan laheyd, Dagaalka Kooxda Argagixisada waa la baabi’in lahaa. Waxaan tuhunsanahay in kooxdu ay caawimaad ka hesho ama nooc ka mid ah iskaashiga dowladda. ”
Hussein Arab Essa, oo ah xildhibaanka kale ee Dowlada Federalka Iyo wasiir Dowlada Shariif Ayaa Sidaasi Yiri,Wuxuuna Wargeyska u Sheegay in siyaasada Shariif Axmed ee bulshada ay ka caawisay jabinta kooxda.
“Dadka deegaanku waxay la wadaagaan macluumaad sababta oo ah waxay arkeen wuxuu sameynayay,” ayuu yiri Essa.
Ma jirin wax isbaarooyin ah mudadaas. Dadku si xor ah ayay u dhaqaaqeen iyagoo aan haysan wax cabsi ah.
Dowladda ayaa beenisay sheegashada inay u oggolaaneyso dagaalyahannada Shabaab inay si xor ah u dhaqdhaqaaqayaan. Laakiin waxaa jiray warbixino sheegaya in ay gudaha u galeen xarumaha dowladda.
Sh.Axmed kacdoonkiisii ​​siyaasadeed ee kacsanaa wuxuu bilaabmay 2003. Markii uu ku soo biirey Midowgii Maxaakiimta Islaamiga (UIC), wuxuu galay darajo sare, isagoo noqday hogaamiyaha kooxdii ka carooday qabqablayaashii lagu eedeeyay inuu la shaqeynayay ciidamada Itoobiya si ay u afduubaan dadka deegaanka.
Xiriirkeenna Kenya ma aheyn mid xun. In kasta oo ay taageertay dawladdii ku-meel-gaarka ahayd ee Madaxweyne C / llaahi Yuusuf.
“Dadka reer Kenya waxay fahmeen in Siyaasada Shariif ay ahayd Siyasad Wanaagsan. Qaar ka mid ah saraakiisha dowladda ayaa leh ra’yi ka duwan laakiin mas’uuliyiinta Kenya badankood waxay u arkeen UIC inay tahay awood ay tahay inay la xiriiraan. ”
Ka dib wuxuu kormeeray dhismaha Isbaheysiga Dib-u-Xoreynta Soomaaliya ee Asmara, Ereteriya, Sebtember 2007. Waxaa ka mid ahaa Sheekh Shariif, Daahir Aweys, Af-hayeenkii hore Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo kuxigeenki hore ee dowladii ku-meelgaarka ahayd Hussein Hussein Farah.
Sannadkii 2009, wuxuu ka adkaaday 16 ka mid ah xisbiyadii doorashada madaxweynaha ka dib wadahadalo ka dhacay Jabuuti.
Isla markiiba, qof ka soo horjeedaa Itoobiya ayaa hadda ahaa xulufadiisa. Guusha Axmed ayaa inta badan sabab u ahayd taageerada ka timid Addis Ababa iyo Nairobi.
Dadka dhaliila ayaa ka soo horjeestay nooca siyaasadiisa muddadii maalmihii ay Maxaakiimta maamuli jirtay Muqdisho, iyaga oo sheegay in ay ahayd maamul la mid ah taalibaan.
Isbahaysi ay la galeen Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (Amisom), ciidamada Axmed waxay Al-Shabaab ka sii wadaan gudaha dalka.
Sikastaba Warbixintani Ayaa Loo Qaadan Karaa Propogando Hadaba Kenya Ku Tageerayso Shariif Soo laabashadiisa.
Previous articleDAAWO VIDEO Deg Deg Beelahi Ugu Badna Somaliland Adis Sababa Midnimo Somali Uga Dhawaqay ,Sland Xirir Ujartay Itoobiya
Next articleDAAWO VIDEO FADEEXAD:Faysal Cali Waraabe”Muuse Biixi Hooyaday Buu Caayey Wuuna Igu Soo Baxsaday